Chia Co Chia Mkpụrụ Black BlackG Pouch | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Chia Co Chia Mkpụrụ Black 150G Pouch– Ordrs
Chia Co Chia Mkpụrụ Black 150G obere akpa
Black Chia Mkpụrụ
Maka ụzọ ndị ọzọ dị mfe iji nwee obi ụtọ chia gaa na thechiaco.com
Chọta anyị na Instagram, Twitter na Facebook
Rie chia, kwa ubochi.
Chia bụ ihe ọkụkụ kachasị elu nke Omega 3, fiber na protein
Enwere ike iri Chia na raw ma ọ chọghị egweri. Gwakọta 1tbsp n'ime muesli ma ọ bụ ọka gị, n'ime salads ma ọ bụ smoothies, ma ọ bụ tinye na nri gị. Nwee obi ụtọ ma oji na ọcha, enweghị ọdịiche dị na nri.
Na-akọ ugbo na-adịgide adịgide na gburugburu ebe obibi zuru oke. Anyị na-eto chia 15 Celsius site na ikuku, yana ihu igwe dị mma, ala na mmiri iji mepụta mkpụrụ nke ogo kacha mma. Chia anyi bu cha cha na 100% free chemical.
Ọ dịghị ihe ọ bụla ma na-eto mkpụrụ Chia. Anyị na-ekwe nkwa ogo ngwaahịa anyị ka anyị na-eto ya n'onwe anyị.
Na Chia Co anyi nwere obi uto banyere ezi ihe oriri na-edozi ahu. Anyị na-ahapụ chia anyị chara n'onwe n'ụzọ dị nro na iji mmiri ndọda iji nweta ogo kachasị nke ogo nri.
Omega dị elu 3
Isi mmalite nke protein